Marihana tsara kosa anefa fa ny olona milaza fa namana akaiky ilay voakasika no nahazoana io vaovao io afak’omaly, ary raha nanontaniana ry zareo dia nanamafy fa izay no zava-nitranga. Tsy marina ny filazana naparitaka tamin’ny Facebook fa nisy vehivavy narary nalefa tany amin'ny tranom-paty na morgue, kanefa tsy maty akory. Ny mpitsabo matihanina ihany no afaka mandray fanapahan-kevitra momba izany, hoy ny fanazavana. Nanokatra fanadihadiana avy hatrany momba io toe-javatra io ny mpitantana ny hopitaly. Noho io toe-javatra io, dia nohamafisina ny fiaraha-miasan'ny mpampalala vaovao amin'ny tompon'andraikitry ny hopitaly mba hahafahana mahazo vaovao ara-potoana hisorohana ny fifangaroan-javatra na sanatria vaovao tsy mitombina izay mety hanohintohina. Vonona hatrany izahay hizara ny vaovao misy sy marina, hoy ny avy ao amin’ity hopitalim-panjakana ity, ary manome toky ny rehetra fa hentitra ny fanaraha-maso sy ny fomba fiasa ka tsy tokony hitaintaina. Mampitandrina ny mpanely tsaho ihany koa ny tompon’andraikitry ny HJRA fa handray ny andraikiny amin’ny mety ho fanasoketana na fanalam-baraka azy.